Mbiri Yekambani-G STAR KUTengesa LIMITED
G STAR inyanzvi yekugadzira uye mutengesi of simbi yekugadzira tin kavha uye zvingaitwa of tin anogona otomatiki kugadzira michina kubvira 2010.
Kana ari edu mabhokisi ekugadzira fekitari, isu tinokwanisa kupa midziyo yetini iyo inogona kushandiswa mupakeji yechikafu, mutambo wechipo pasuru, zvizorwa kurongedza, imba zvigadzirwa uye nezvimwe.
Zvese zvinhu zvekudhindisa inki zvemabhokisi etini / tini, kusanganisira kugadzirwa, kurongedza uye kuchengetedza, zvinosangana nezvinodiwa zvekuchengetedza chikafu.
Parizvino, isu tinogadzira uye tinotumira kunze tini kesi senge pazasi:
Chikafu pasuru gaba:kendi tin bhokisi, chokoreti tin box, chemindi mabhokisi etini, kuki tin box, bhisikiti tin bhokisi, keke yemwedzi tin bhokisi, nzungu tin bhokisi, tii tin bhokisi, waini tini, kofi tin box, nguva tini, etc.
Mutambo chipo pasuru tini: Matinji eKisimusi, Isita tin mazai, Easter migomo, Zuva reValentine tini dzakaumbwa pamoyo, Zuva raAmai tin chipo kurongedza zvichingoenda zvakadaro.
Zvizorwa pasuru gaba: siyana ganda kutarisirwa tin package, zvinonhuwirira tin, mafuta anokosha tin, kumeso kumeso tin, make-ups tin uye cleaners gaba, etc.
Yepamba tini inogona kurongedza: tini mari yekuchengetedza bhengi, kenduru tin bhokisi, penzura tin makesi, tamba mitambo tini mudziyo, vana matoyi tini yekuchengetedza, shangu polish tini mabhokisi uye zvichingodaro.
Na more kupfuura zana zana seti epamberi epamusoro Tin Bhokisi Kugadzira Machina, dzakatenderedza 10 yakazara-otomatiki yekugadzira mitsara, gadzira ese mabhokisi esimbi yakatsiga mhando uye yakavimbiswa dhirivhari.
Anopfuura chiuru seti yetini bhokisi uye gaba rinogona kuumbwa kusangana nezvigadzirwa zvevatengi zvetini bhokisi kurongedza.
Yedu yesimbi tini inogona kugadzira michina fekitori, isu tinogadzira uye tinopa mhando yepamusoro semi otomatiki simbi tini inogona muviri michina, yakazara otomatiki simbi tini yekugadzira michina michina, manual tini inogona kuvhara michina, otomatiki tini inogona kuvhara michina, 2 zvidimbu tini inogona michina, uye imwe inoenderana tini inogona kugadzira michina uye tin turuini uye inofa.
Our michina mhanya chaizvo chetevere mune edu ekutanga vatengi zvirimwa zvishoma 10 MAKORE. Enzanisa nevatinokwikwidza, isu tinoziva kugadzira yakanaka uye inoshanda tin gaba michina, sezvo edu mabhokisi emata fekitori michina inogadzirwa isu pachedu. mainjiniya edu ane anopfuura makore gumi nemashanu gaba anogona muchina nyanzvi kumashure, isu tiri chaizvo confident kukubatsira kumisikidza gaba rinogona Kubudisa mutsetse.
G STAR is nguva dzose nepfupi yekushandira uye kugutsa vatengi, uye isu tinotarisira kutarisira kuve edu ese vatengi vedu vakavimbika vamwe vedu.